Ruzivo rwakadzama nezve CHECKDB Kanganiso "Panguva yekuitazve basa rakachengetwa mudhatabhesi 'xxxx', kukanganisa kwakaitika paRekodhi ID."
musha Products DataNumen SQL Recovery CHECKDB Kanganiso: Panguva Yekudzoreredza Kweakapihwa Mashandiro MuDhatabhesi 'xxxx', Kanganiso Yakaitika PaRog Rekodhi Id
Ruzivo rwakadzama nezveCheckDB Kanganiso "Panguva Yekudzoreredza Kwekushandisa Kwakachengetwa MuDhatabhesi 'xxxx', Iko Kukanganisa Kwakaitika PaRog Record Id."
Msg 824, Chikamu 24, State 2, Mutsara 2
SQL Server yaona kukanganisa kunoenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo pejiid (inotarisirwa 1: 143; chaiyo 0:9). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa kwepeji (1: 143) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x0000000011e000 mufaira 'C: Chirongwa Mafaira SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
Msg 3313, Chikamu 21, State 1, Mutsara 2
Munguva yekuitisa patsva kweakashanda mashandiro mudhatabhesi 'Error1', kukanganisa kwakaitika paRekhodhi ID (135: 752: 2) Kazhinji, kutadza chaiko kwakambotemerwa sekukanganisa muWindows Chiitiko Log sevhisi. Dzosera iyo dhatabhesi kubva kuzere backup, kana gadzirisa dhatabhesi.
Msg 3414, Chikamu 21, State 1, Mutsara 2
Iko kukanganisa kwakaitika panguva yekudzoreredza, kudzivirira iyo dhatabhesi 'Error1' (39: 0) kubva ku restarting. Wongorora zvikanganiso zvekudzoreredza wozvigadzirisa, kana kudzosera kubva kune inozivikanwa inozivikanwa backup Kana zvikanganiso zvisina kugadziriswa kana kutarisirwa, bata technical Support.
SQL Server yakaona inonzwisisika-inoenderana-yakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo pejiid (inotarisirwa 1: 160; chaiyo 0:41). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1: 160) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x00000000140000 mufaira 'C: Chirongwa Mafaira SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
Msg 824, Chikamu 24, State 2, Mutsara 4
Msg 3313 inoratidza mashandiro erogi haigone kuitwa.
Kana CHECKDB isingakwanise kuita mashandiro ekushandisa, inozivisa meseji yekukanganisa Msg 3313 uye edza kugadzirisa zvikanganiso. Kana isingakwanise kugadzirisa iko kukanganisa, ikozve kupora kunotadza uye kunotungamira kune mamwe mhosho, senge Msg 3414 uye Msg 824.
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera ayo anokonzeresa iyo Msg 3313 mhosho:
SQL Server 2014 Kukanganisa9.mdf Kukanganisa9_fixed.mdf